‘प्रकाण्ड’ चौथोपटक पक्राउ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘प्रकाण्ड’ चौथोपटक पक्राउ
प्रकाशित मिति १९ भाद्र २०७५, मंगलवार १३:०६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई सर्वाेच्च अदालतले पटकपटक रिहाको आदेश दिए पनि प्रहरीले भने पटक पटक पक्राउ गरिरहेको छ ।
सोमबार नुवाकोट जिल्ला अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै नेपाल प्रहरीले प्रकाण्ड’ लाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी भोजपुर लगिएको छ । ‘प्रकाण्ड’ चौथोपटक पक्राउ परेका छन्।
तर, भोजपुरमा प्रदेशसभा एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला उम्मेदवार शेरधन राईलाई लक्ष्य गरी बम आक्रमण गरी घाइते बनाएको घटनामा उनको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
यसअघि पनि अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका उनलाई नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं ९ स्थित सडक निर्माणमा प्रयोग भएको दुई थान स्काभेक्टरमा आगजनी गरेको अभियोगमा मुद्दाको अनुसन्धान गरी पर्याप्त आधार र कारण तथा प्रमाण प्रयाप्त नभएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएको निकायबाट बारम्बार आदेशलाई अपमान गरेको भन्दै नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रोहबरमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै नुवाकोट प्रहरीले जिल्ला अदालत नुवाकोटमा बुझाएर रिहा गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले विश्वकर्मालाई अदालत परिसरमा छोडेलगत्तै अदालत परिसरबाटै भोजपुर लैजान भन्दै ‘जरूरी प्रकाउ पूर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको हो। ‘प्रकाण्ड’ गत साउन २२ गते पक्राउ परेका थिए ।
एआइजीका अनावश्यक दरबन्दीले मासिक करोडौं ब्ययभार थपेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री देउवा डीआइजीको दरबन्दी थप्न चर्को दबाब दिंदै !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीमा ४ दरबन्दी थपेर डीआइजी…
सोलुखुम्बु । सगरमाथा आधार शिविरदेखि क्याम्प चारसम्मको बाटो खुलेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि प्रयोग गरिने क्याम्प चारसम्मको बाटो खुलिसकेको…
प्रदेश प्रमुखमा सामाजिक कार्यकर्ता: सबैकाे नालीबेली !
काठमाडौं । लामो समयको विवाद र राजनीतिक खिचातानीमा नियुक्त हुन नसकेका प्रदेश…
डोटी । निर्माण कार्य शुरु गरिएको ३३ वर्ष पूरा हुँदा पनि बिपी नगर– बोगटान– दिपायल सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन…
धन्न बचे जिम्बाबेका राष्ट्रपति
काठमाडौं । जिम्बाबेका राष्ट्रपति इमर्सन मनाङगाग्वा बम आक्रमणबाट बालबाल बाँचेका छन् । उनी आफैmे बुल्वेओ शहरमा शनिबार भएको विस्फोटबाट…
कसको संरक्षणमा छन् नागराज ?
काठमाडौं । भारतमा हुने इंडियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) खेलमा अर्बै रूपैंयाको जुवा हुदै आएको छ । जुन जुवालाई बुकी…
हाई ब्लड प्रेसर कम गर्न कुन फलफूल खाने ? जानी राखौँ4views